Abathengisi beBra kunye neFektri- Abavelisi beBra China baseTshayina
Isiko lala uthixokazi wesmina osisiyatha ongasemva we-strapless bra ubuyatha kwakhona okunamathelayo ukunyanzela i-silicone bra
I-Lace-up iqokelela isandla se-bionic, amaphiko ebhabhathane amile okwebhabhathane, indibano enamandla, indawo enkulu enomthi we-arc, esongelwe phantsi kwamafutha omlilo, ukuphucula ikomityi kwangoko, umtya wokutsala osisi-8, uyilo olunokuphefumla ngaphandle kweglue. I-Bio-silicone inamathele kakhulu, kulula ukunamathela kwaye akukho lula ukuwa kuyo.
FASHION umgangatho ophezulu okrwada ongenazintambo u-Backless strapless Bra tyhala phezulu i-leopard yokuprinta i-adhesive bra
Ukuphakama okuphezulu kwesibhengezo sesifuba, uyilo lweendlebe zomvundla, umhle kwaye kulula ukurhola, iipateni ezintathu onokukhetha kuzo. Impilo ye-bio yendalo esempilweni, inamathele kakhulu kwaye akukho lula ukuyiwela. Thanda umphezulu werabha ngaphandle koyilo lweglue, uphefumlela ukukhusela isifuba.
Abafazi abatsha i-Silicone Push Up women underwear engabonakaliyo iBra Self Adhesive Strapless Bandage Free Solid Bra
Amanzi angabonakaliyo alahla i-silicone yokuphakamisa isifuba, usebenzisa i-bio glue yendalo, impilo kunye nokhuseleko. Ukubonakala kwe-Super akukho lula ukuwa, ukungabinamanzi kunye ne-sweatproof. Phakamisa ijika yesifuba, i-sexy kwaye ingabonakali.
Umzi mveliso uthengise ngokuthe ngqo i-silm yabasetyhini engenakubuyela kumva ongabonakaliyo we-bra self adhesive bra strapless silicone bra
Ikomityi ebunjiweyo eyenziwe ngesandla, eyenziwe ngamehlo, ifanelana nejika lomzimba lomntu. I-52 vents ivumela isifuba ukuba siphefumle ngokukhululekileyo. Ikomityi ye-3D yenxalenye ezintathu zomngxunya, ukuyila kwekomityi yenxalenye ezintathu, yenza isifuba sibe yindalo kwaye sithe tye.
Olona hlobo luhle kunye nobukhulu obuPhezulu Abasetyhini abaPhezulu beSiTshixo soLawulo lweTummy uLawulo lweSwati enamaNqaku ngeSondo leButts Lifter
Iibhulukhwe ze-hip-hip ezingabekwanga uphawu, ezizele isiponji se-hip, ezinemikhono yendalo ngokwemvelo. I-gauze yescreen yelace, izele ngumtsalane wobufazi, i-sexy kwaye ayinamthungo. I-elastic ephezulu ifanelekile, iqinile kwaye iqinile. Itekhnoloji yokubumba into enye, le nto ilula kwaye ayingophawuli kwaye ayinakuphefumla.
Amanenekazi aMabhenana e-Sexy Ingono ikhuselayo Isifuba
Le mveliso sisikhonkwane esingabonakaliyo se-pentagram. Uyilo lweSequin, imibala eyahlukeneyo onokuthi ukhethe kuyo, iglu yendalo ye-bio, ukungahambeli manzi kunye nobungqina besithukuthezi, akukho lula ukuwa, umhle kwaye uthandeka.
Umtya ongabonakaliyo owenziwe ngentambo ongabonakaliyo wentliziyo otyhidiweyo ukhuphe i-strapless bra I-Nipple ikhava yengubo
Isitika sesifuba esenziwe sasonka esincinci esincinci, iglue bio yendalo, sisempilweni kwaye sikhuselekile ngaphandle kokungalungelelani. Ukungahambisi kwamanzi kunye nokungena sweatshi, akukho lula ukuwa. Umphezulu werabha awunamngxunya wokufaka umoya weglue, ukhululekile kwaye uphefumle kwaye ukhusela ibele.
Imveliso entsha eshushu ethengisayo yefashoni Exclusive yeHallimesi yeKrisimesi enganxitywanga emtshatweni Imilo yamathambo esinqeni bra I-Nipple Pasties Nipple Cover ye-Women
Izinto zokuncamathelisa izinto zeKrisimesi, ezihlekisayo nezihlekisayo, ukhetho olumnandi, iipateni ezilithoba ongakhetha kuzo. Impilo ye-bio-enempilo, ukungabinamanzi kunye nokukhupha ubungqina, akukho lula ukuwa. Inkangeleko ecwebezelayo. Ingabonakali kwaye i-sexy
I-Silicone Strapless Adhesive yeBra enokuSebenziseka ingenamthungo ityhalela phezulu i-Backless engabonakaliyo yabasetyhini yeentyatyambo-imilo
Imilo yeentyatyambo entsha iqokelela ingono, iphakamise kwaye isonge isifuba, iqokelela isifuba. Uyilo lomngxunya we-ventilation, lukhululekile kwaye alunamthungo. Amaqhosha anokufunyanwa kwisifuba aqokelela esifubeni. I-bio gum yendalo, ekhuselekileyo kunye ne-allergenic.